ပထမ clock ၏သမိုင်း
Sun က clock, ရေ clock နှင့် Obelisks များ၏သမိုင်း
Sun က clock, ရေ clock နှင့် Obelisks
ဒါဟာမကြာသေးခင်ကအတန်ငယ်သည်အထိမဟုတ်ခဲ့ - သည်အနည်းဆုံးလူ့သမိုငျး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ - လူတွေတစ်နေ့တာ၏အချိန်ကိုသိရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားခဲ့ရကြောင်း။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့မြောက်အာဖရိကဂရိတ်ယဉ်ကျေးမှုပထမဆုံးအချို့ 5000 6000 မှလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းအောင်နာရီကိုစတင်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့လက်ထောက်ယန်နှင့်တရားဝင်ဘာသာတရားနှင့်အတူဤယဉ်ကျေးမှုကိုပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်သူတို့ရဲ့အချိန်စုစည်းဖို့လိုအပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
တစ်နာရီ၏ Element တွေကို
အားလုံး နာရီ နှစ်ခုကိုအခြေခံအစိတ်အပိုင်းများကိုရှိရမည်: သူတို့ကအချိန်ညီမျှနှစ်တိုးချွတ်အထိမ်းအမှတ်သောပုံမှန်, စဉ်ဆက်မပြတ်သို့မဟုတ်ထပ်တလဲလဲဖြစ်စဉ်ကိုသို့မဟုတ်အရေးယူရှိရမည်။
ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်စဉ်များ၏အစောပိုင်းဥပမာမိုဃ်းကောင်းကင်အနှံ့နေရောင်၏လှုပျရှားမှု, နှစ်တိုးအတွက်မှတ်သားဖယောင်းတိုင်, တခုတ်တရလှောင်ကန်, သဲမျက်မှန်သို့မဟုတ်နှင့်အတူရေနံမီးခွက် "hourglasses," နှင့်, အရှေ့တိုင်း, အရှို့မယ်လို့နံ့သာပေါင်းကိုနှငျ့ပွညျ့စုံသေးငယ်တဲ့ကြောကျခဲသို့မဟုတ်သတ္တုဝင်္ပါဝင်သည် တစ်ခြို့သောအရှိန်အဟုန်မှာ။
၏သမိုင်း timekeeping နာရီနှုန်းကိုထိန်းညှိဖို့အစဉ်အဆက်ကပိုတသမတ်တည်းလုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်ဖြစ်စဉ်များအဘို့အရှာဖွေရေး၏ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ အဲဂုတ္တုလူတို့သည် တရားဝင်နာရီပုံနဲ့တူတဲ့အရပ်သို့သူတို့နေ့ရက်ကာလကိုဝေဖို့ပထမဦးဆုံးအကြားခဲ့ကြသည်။ Obelisks - သွယ်, tapering လေးတဖက်သတ်အထိမ်းအမှတ - အဖြစ်အစောပိုင်း 3500 ဘီစီအဖြစ်တည်ဆောက်ထားခဲ့ကြသည်သူတို့ရဲ့ရွေ့လျားမှောင်မိုက်အရိပ်မွန်းတည်ညွှန်ပြခြင်းဖြင့်အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုသို့တစ်နေ့လျှင် partitioner ကမှနိုင်ငံသားများအားဖွင့်, sundial တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ သူတို့ကအစမွန်းတည့်အချိန်၌အရိပ်ယခုနှစ်အတိုဆုံးသို့မဟုတ်အရှည်ဆုံးအခါယခုနှစ်အရှည်ဆုံးနှင့်အတိုဆုံးရက်ပေါင်းပြသခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်းတွင်အမှတ်အသားများထပ်မံအချိန် subdivisions ညွှန်ပြရန်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦး၏အခြေစိုက်စခန်းပတ်ပတ်လည်ကဆက်ပြောသည်ခဲ့ကြသည်။
အခြားအ Sun က clock
ဖြစ်နိုင်သည်ကိုပထမဦးဆုံးခရီးဆောင်နာရီ - - အရိပ်နာရီသို့မဟုတ် sundial နောက်ထပ်အီဂျစ်၏ကျမ်းပိုဒ်ကိုတိုင်းတာရန် 1500 ဘီစီန်းကျင်ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့ကြွတော်မူ "နာရီ။ " ဒီကိရိယာကိုနံနက်နှင့်ညနေပိုင်းများတွင် 10 အစိတ်အပိုင်းများပေါင်းနှစ်ခု "ဆည်းဆာနာရီ" သို့ sunlit နေ့ကဝေပေးလေ၏။
ငါး variable လှပတဲ့အမှတ်အသားများနှင့်အတူကြာမြင့်စွာပင်စည်နံနက်ယံ၌အရှေ့နှင့်အနောက် oriented ခံခဲ့ရသောအခါ, အရှေ့အဆုံးတခုတခုအပေါ်မှာမြင့်မားသောဂိုးဘားဒဏ်ချက်ရာကျော်တစ်ဦးကိုပြောင်းရွှေ့အရိပ်ကိုသွန်းလေ၏။ မွန်းတည့်အချိန်၌, ကိရိယာနေ့လည်ခင်းတိုင်းတာရန်ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်လှည့်ခဲ့ပါတယ် "နာရီ။ "
အဆိုပါ merkhet, အသက်အကြီးဆုံးလူသိများနက္ခတ္တဗေဒ tool ကို, နှစ်ဦး merkhets ယင်းဝင်ရိုးစွန်းစတားသူတို့နှင့်အတူတန်းစီနေဖြင့်တစ်ဦးမြောက်ဘက်-တောင်ဘက်လိုင်းတည်ထောင်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်တဝိုက် 600 ဘီစီအတွက်အီဂျစ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးခဲ့သည်။ သူတို့ဟာထို့နောက်အချို့နဲ့အခြားကြယ်ဒီဂရီမျဉ်းဖြတ်ကျော်လာသောအခါအဆုံးအဖြတ်အားဖြင့်ညအချိန်နာရီကိုချွတ် mark ရန်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ပိုပြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံးတိကျမှန်ကန်မှုများအတွက်ရှာပုံတော်ခုနှစ်, sundials ပိုပြီးပီပီခဲ့ပုံစံများကိုမှအပြားအလျားလိုက်သို့မဟုတ်ဒေါင်လိုက်ပြားကနေတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်းဗားရှင်း hemisphere ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုအလယ်ပိုင်းဒေါင်လိုက် gnomon သို့မဟုတ် pointer ကိုသယ်ဆောင်နှင့်နာရီလိုင်းများအစုံနှင့်အတူ scribed ထိုကျောက်တစ်ဘလောက်သို့ဖြတ်တဲ့ပန်းကန်-shaped စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ hemicycle 300 ဘီစီန်းကျင်ကိုတီထွင်ခဲ့ကြကလည်း, တစ်နှစ်ထပ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု၏အစွန်းသို့ဖြတ်တစ်နှစ်ခွဲ-ပန်းကန်တစ်ခုသဏ္ဌာန်ပေးရန် hemisphere ၏အသုံးမကျထက်ဝက်ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ အသက် 30 ဘီစီအသုံးပြုပုံ Vitruvius ဂရိနိုင်ငံ, အာရှမိုင်းနားနှင့်အီတလီမှာအသုံးပြုမှု 13 ကွဲပြားခြားနားသော sundial စတိုင်များကိုဖော်ပြရန်နိုင်ဘူး။
ရေနာရီကောငျးကငျအလောင်းများ၏လေ့လာရေးအပေါ်မူတည်မပြုခဲ့ကြောင်းအစောဆုံး timekeepers အကြားခဲ့ကြသည်။
အသက်အကြီးဆုံးတစ်ခုမှာဤအရေမှာယိုခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း sloping နှစ်ဖက်နှင့်ပစ်ရေယာဉ်များခဲ့ကြသည်, နောက်ပိုင်း 325 ဘီစီန်းကျင်ကသူတို့ကိုသုံးပြီးစတင်သူကိုဟေလသလူအားဖြင့် clepsydras သို့မဟုတ် "ရေသူခိုးတွေ" အမည်ရှိ 1500 ဘီစီ၌သင်္ဂြိုဟ်ခဲ့တဲ့အမဲန်ငါ၏သင်္ချိုင်းဂူ၌တွေ့ အောက်ခြေအနီးသေးငယ်တဲ့အပေါက်ထဲကနေတစ်ဦးနီးပါးစဉ်ဆက်မပြတ်နှုန်းသည်။
အခြားအ clepsydras cylindrical ခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်ပန်းကန်-shaped ကွန်တိန်နာဖြည်းဖြည်းချင်းရေအဆက်မပြတ်မှုနှုန်းမှာလာမယ့်အတူဖြည့်ဖို့ဒီဇိုင်း။ ရေကိုအဆင့်အထိသူတို့ကိုရောက်ရှိအဖြစ်အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်အမှတ်အသားများ "နာရီ" ၏ကျမ်းပိုဒ်တိုင်းတာ။ ဤရွေ့ကားနာရီညဥ့်အချိန်နာရီကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့အဖြစ်ကောင်းစွာမိုဃ်းလင်းများတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြပေမည်။ နောက်ထပ်ဗားရှင်းအောက်ခြေမှာရှိတဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်နဲ့သတ္တုပန်းကန်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါပန်းကန်လုံးဖြည့်ပါနဲ့ရေတစ်ကွန်တိန်နာထဲမှာထည့်ထားတဲ့အခါအချို့သောကာလ၌နစ်မြုပ်လိမ့်မယ်။ ဤ 21 ရာစုအတွင်းမြောက်အာဖရိကမှာအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။
ပိုများသောပီပီနှင့်အထင်ကြီးစက်မှုလယ်ယာရေနာရီကို 100 ဘီစီနှငျ့ဂရိနှင့်ရောမ horologists နှင့်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တို့က 500 အေဒီများအကြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဆက်ပြောသည်ရှုပ်ထွေးရေဖိအားကိုထိန်းညှိခြင်းဖြင့်စီးဆင်းမှုကိုပိုမိုစဉ်ဆက်မပြတ်အောင်မှာအချိန်ကျမ်းပိုဒ်၏ fancier display ကိုထောက်ပံ့ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ တချို့ကရေနာရီခေါင်းလောင်းထိုးနှင့် Gong အသံ။ အခြားသူများကဝဠာနည်းနည်းကလူသို့မဟုတ်ပြောင်းရွှေ့ထောက်ပြ၏ကိန်းဂဏန်းများ, Dial နှင့်ချဉ်ကြော်မော်ဒယ်များကိုပြသတံခါးနှင့်ပြတင်းပေါက်များဖွင့်လှစ်။
ရေစီးဆင်းမှုနှုန်းတိကျစွာထိန်းချုပ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်, ဒါကြောင့်စီးဆင်းမှုအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်နာရီကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့တိကျမှန်ကန်မှုကိုအောင်မြင်ရန်ဘယ်တော့မှနိုင်ဘူး။ ပြည်သူ့သဘာဝကျကျသည်အခြားချဉ်းကပ်မှုမှဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။
ဤသည် Octagon ဖွဲ့စည်းပုံမှာ sundials နှင့်စက်မှုနာရီညွှန်းကိန်းနှစ်ခုလုံးကိုပြသဘီစီတစ်ဦးကဂရိနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်, Andronikos, ပထမရာစုကအေသင်အတွက်လေပြေ၏မျှော်စင်၏ဆောက်လုပ်ရေးကြီးကြပ်။ ဒါဟာမျှော်စင်၎င်း၏အမည်ကိုတယ်ပေးသောအနေဖြင့်ရှစ်လေတိုက်နှုန်းများအတွက် 24 နာရီစက်မှုလယ်ယာ clepsydra နှင့်အညွှန်းကိန်း featured ။ ဒါဟာယခုနှစ်ရာသီနှင့်ချဉ်ကြော်ရက်စွဲများနှင့်ကာလကိုပြသ။ ရောမလည်းစက်မှုလယ်ယာ clepsydras ဖွံ့ဖြိုးပြီး, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ရှုပ်ထွေးအချိန်ကျမ်းပိုဒ်အဆုံးအဖြတ်များအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းများကျော်အနည်းငယ်သာတိုးတက်မှုပြည့်စုံ။
200 1300 မှအေဒီကနေဖွံ့ဖြိုးအောင်အရှေ့ဖျားဒေသ, စက်မှုလယ်ယာချဉ်ကြော် / နက္ခတ္တဗေဒနာရီမှာတော့တတိယရာစုတရုတ် clepsydras နက္ခတ္တဗေဒဖြစ်ရပ်ရုပ်ပြကြောင်းအမျိုးမျိုးသောယန္တယားမောင်း။
အများဆုံးပီပီနာရီတာဝါတိုင်တစ်ခုမှာ 1088 အေဒီမှာရှိတဲ့စု Sung နှင့်သူ၏အပေါင်းအသင်းများကတည်ဆောက်ခဲ့
su Sung ရဲ့ယန္တရား, 725 အေဒီဒီ su Sung နာရီမျှော်စင်တဝိုက်ကိုတီထွင်တဲ့ရေမောင်းနှင် ESCAP ထည့်သွင်း 30 ကျော်ခွကေိုအရပ်ရှည်ရှည်, ကြေးဝါအာဏာမောင်းနှင်သိမ်းယူ armillary နယ်ပယ် အတွက်ခွင့်ပြုကြောင်းတံခါးများနှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ခုအလိုအလျှောက်လှည့်ကောငျးကငျကမ္ဘာလုံးနှင့်ငါးမျက်နှာစာပြားတို့အတွက် ခေါင်းလောင်းထိုးသို့မဟုတ် Gong မြည်ရာပြောင်းလဲနေတဲ့ manikins ၏မြင်ကွင်း။ ဒါဟာနေ့၏နာရီသို့မဟုတ်အခြားအထူးအဆညွှန်ပြတက်ဘလက်များကျင်းပခဲ့သည်။
အဘယ်သူသည် Wi-Fi တီထွင်?
Kevlar များ၏သမိုင်း - Stephanie Kwolek
ဟာ့ဒ်ဝဲ Tools များ၏သမိုင်း
လေယာဉ်ပျံပျံသန်း၏ Dynamics ကို
ချားလ်စ် Kettering နှင့်လျှပ်စစ်စက်နှိုးစနစ်
အချို့သောစပိန်ကြိယာ '' သည် Le '' အသုံးပြုခြင်း
ဟိန္ဒူ Holi ပွဲတော်ဘို့အနာဂတ်နေ့စွဲများ
9 Whale အကဲခတ်သိကောင်းစရာများ
ရီ Sun ကရှင်, ကိုရီးယားရဲ့ဂရိတ်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
ထောက်ပံ့ရေး၏စျေးနှုန်း elasticity calculate ကိုမှကဲကုလသင်္ချာအသုံးပြုခြင်း
Moorhead အဆင့်လက်ခံရေးမှာ Concordia ကောလိပ်
ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံပေးစာ S ကိုအတူစတင်ခြင်း
သင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ပေါ့တကယ်ပဲ Funny ဆွဲပုံများ
ဒုတိယ Noble အမှန်တရား
အဆိုပါ Defender ဂေါက်သီးဂိမ်း Play လုပ်နည်း
ကြယ်များနှင့်မည်သို့ Long ကသူတို့ Live ဘူးဘာတွေလဲ?
ဆစ်ခ်ဓမ္မသီချင်းကို Hard Times သတင်းစာ Dookh Santaap Na Lagee အတွက်အားပေးစကားကမ်းလှမ်း
သင်ကလွတ်သွားသောဖူးနိုငျ '' တောင်ပိုင်း Park က '' ဖန်တီးရှင်များထံမှ 6, Movies
Manon ဇာတ်လမ်းအကျဥ်း Jules Massenet ရဲ့အော်ပရာ၏ပုံပြင်
ဘောလုံးကလပ် NICKNAME ပြီးတော့သူတို့ဘာကိုဆိုလို
အီတလီကြိယာ conjugation: Passare
တစ်ဦး Lingua Franca (elf) အဖြစ်အင်္ဂလိပ်
အလှမယ် Brill ရဲ့ပျက်စီးလွယ် Fantasy
5 အရာတိုင်းသည်နယူးလေထီးခုန်ကိုသိရှိရမည် (သို့သော်အဘယ်သူမျှသင့်ကိုပြောပြပါလိမ့်မည်)